Dowladda oo laga dalbaday inay cadeyso u jeedka ciidanka Itoobiya ee soo galay Galmudug – Hornafrik Media Network
Dowladda oo laga dalbaday inay cadeyso u jeedka ciidanka Itoobiya ee soo galay Galmudug
By Liibaan Nuur	 On Nov 30, 2019
28-kii bishan Ciidamo ka socda dowlada Itoobiya,hayeshee wali aan la xaqiijin in ay ka tirsan yihiin Howgalka Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb oo martigalineysa doorasho ay saluugsan yihiin Madaxda Ahlu-sunna oo in muddo ah ka talinaya magaaladaasi.
Walaac xoog leh ayaa laga muujinayaa in Ciidamada Itoobiyaanka ah ee la tilmaamay in aysan ka tirsan Amisom ay faragaliyaan doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug.
Inta badan Xisbiyada Siyaasadeed ee dalka iyo qaar kamid ah Siyaasiyiin kasoo jeeda Galmudug ayaa walaac iyo cambareyn xoggan ka muujiyey ciidamadaas, isla markaasina la sheegay in lagu qal qal galinayo doorashada Galmudug.
Saacadihii laso dhaafay Madasha Xisbiyada Qaran oo ay ku mideysan yihiin Xisbiyada Mucaarad ah iyo Xisbiga wadajir aya soo saaray qoraal ay kaga hadlayaa Xaalada Galmudug ee waqtigan iyo suurtagalnimada faragalinta doorashada ee Ciidamadaasi.
Xisbiga Uu Hoggaamiyo Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi shakuur warsame ayaa goordambe oo xalay ah soo saaray Warbixin dheer oo ay kaga hadlayaa Xaalada Galmudug.
Ugu horeen War-Saxaafadeedta Xisbiga Wadajir ayaa waxaa lagu yiri “waxaan Cambreyneynaa faragelinta qaawan ee ciidanka Itoobiya ku hayaan Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo lubbaland, gaar ahaan Gobollada GaIgaduud iyo Gedo.”
Warbixin xisbigaas ayaa Sidoo kale waxaa kamid aheed “Waxaa cad in ciidanka Itoobiya ee aan ka tirsaneyn AMISOM ee gaaray Dhuusamareeb in maamulka Farmaajo uu doonayo in uu ku afduubo doorashada Galmudug, sidii uu sanadkii horeba ka sameeyey doorashadii Koonfur Galbeed, halkaasoo doorashadii lagu boobay.”
Madasha Xisbiyada qaran ayaa hore sidoo kale dhankooda waxaa ay u soo sareyn warqad cabasho ah oo ay u direen Ra’iisul-wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed,waxaana laga xusikaraa qodobadii ay soo qaateyn “Xilliga aan qoreyno warqaddan waxaa ciidamo aad u qalabeysan oo ah Itoobiyaan aan ka mid ahayn Amisom la geeyey magaalada Dhuusomareeb, si loo faro-geliyo doorashada soo socota loona xaqiijiyo guusha musharax horey loo go’aamiyey,” ayaa lagu yiri qoraalka Madasha Xisbiyada.
Hadaba Maxaa ka jira walaaca Xisbiydan ee doorashada Galmudug,Laamaha amaniga Galmudug iyo kuw dowlada dhexe maxaa laga filan karaa waakan Danjire Caalin
Dowlada Fedaraalka ah ee Soomaaliya ayaa hore Magaalada Dhuusamareeb u geysay Ciidamo Booliis ah oo laga qaaday Muqdisho,Ciidamo Jabuutiyaan ah oo laga keenay Gobolka Hiiraan iyo Militeri,halka Itoobiyaanka gaaray magaalada ay fariisin ka sameysteen Meel aan sidaasi uga fogeyn Garoonka Diyaaradaha Dhuusamareeb.
Si guud waxaa u jira Khilaaf Siyaasadeed oo u dhaxeya Dowlada Faderaalka ah ee Soomaaliya iyo Ahlu-sunna oo isku haya,nimaadka loo dhisayo Maamulka Galmudug iyo sida loogu dabaqay Heshiis ay wada gaareyn labada Dhinaca kaas oo dhigayen in ahlu-sunna 35 kursi laga siiyo baarlamanka.
Guddiga loo xil-saraay arrimaha Galmudug dhisamaheed ayaa maanta bilaabaya Xulista Xildhibaanada Cusub ee Maamulkaasi,waxaana ay donayaa in Bil gudaheeda lagu soo afmeero Doorashada Maamulkaasi.
Weerar ka dhacay London iyo Booliska oo ka war bixiyey.
Jabuuti oo ku guulaysatay guddoonka baarlamaanada Afrika